Isikhokelo esiphezulu se-Exemestane ukuphatha umdlavuza webele kwibafazi
Yonke into malunga ne-Exemestane
1. Yintoni i-Exemestane? Ingaba isebenza kanjani? 2. I-Exemestane isebenza njani?
3. I-Exemestane Uses 4. I-Exemestane dosage
5. Iziphumo ze-Exemestane 6. Exemestane isigamu-ubomi
7. Iziphumo zempembelelo ze-Exemestane 8. Izibonelelo ze-Exemestane
9. Ukuhlolwa kwe-Exemestane 10. Exemestane e thengiswayo
11. I-Exemestane ukuphatha umhlaza wesibeleko kubasetyhini
1.Yintoni i-Exemestane? Ingaba isebenza kanjani?
Exemestane (107868-30-4) isilwanyana esisemlonyeni esisetyenziswe kunyango lweentlobo ezithile zesifo somhlaza wesifuba esifana ne-hormone-receptor-positive cancer. Isiza kakhulu sisetyenziselwa unyango lomhlaza kubasetyhini emva kokumisa umva. Exemestane (107868-30-4)Ikwadlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni ukubuya komhlaza kwizigulane. Ngokuqhelekileyo, ukukhula kancinci kwamathumbu kuhanjiswa yi-hormone ye-estrogen. Esi sidakamizwa siye yanceda izigidi zezigulane ezinobangela obuchaphazelekayo, kwaye ugqirha uya kumisela imithi emva kokuvavanya imeko yakho. Eli chiza lisebenza ngokunciphisa amanqanaba ama-hormone e-estrogen emzimbeni wakho, enceda ekunciphiseni nasekuguquleni imiphumo yesifo somhlaza.
Nangona kunjalo, nangona le nkunkuma iyinto efumanekayo enkulu ekufuneka ikuncede ukulawula umdlavuza webele, abafazi ekukhuleni kwabo baxhalabele ukuyisebenzisa. Isiyobisi singasetyenziswa kunye namanye amayeza afana ne-goserelin (i-Zoladex) okanye nayiphi na into kuxhomekeke kwimeko yakho. Ukusebenzisa isibisi ngaphandle kwemigqirha yesigqirha kunokukhokelela kwimiphumo emibi, kwaye ke, kucetyiswa ukuba uhlale uviwo lwezonyango phambi kokuba uqale ukuyisebenzisa. Isilwanyana sifumaneka kwiimpawu ezahlukeneyo ezifana Aromasin kodwa umxholo, kwaye umyinge uhlala ufana. Amayeza kufuneka akukhokele kuyo yonke inkqubo ekuthengeni ukusetyenziswa.
Unokuthenga ityilesi ye-intanethi okanye nawuphi na umthengisi ohloniphekileyo ojikeleze kuwe. Nangona kunjalo, kufuneka uqaphele xa uthengela nayiphina imithi kuba unokufumana kalula iimveliso ezingekho nto ezingenakho ukuhambisa iziphumo ozifunayo. Siza kuxubusha indlela kunye nendawo yokuthenga i-Exemestane engcono kunye nekhwalithi kamva kweli nqaku.
2.I-Exemestane isebenza njani?
Njengoko kuchazwe ngentla, le chiza isebenza ngokunciphisa okanye ukunciphisa imveliso ye-hormone ye-estrogen emzimbeni wakho. Le hormone yiyona nto ibangela ukuphuhliswa komhlaza wesifuba, kwaye xa kungekho mveliso encinane, kuthetha ukuba uya kulawula ukukhula kwesi sifo. Nangona kunjalo, eli liyeza lisebenza kuphela kunyango lwe-estrogen receptor (ER +). Oko kuthetha ukuba, ukuba umdlavuza wakho webele uyisiphumo se-hormone receptor, i-Exemestane ayiyi kukunceda ukulawula eso sifo. Ngoko ke, akusiyo yonke imitshato ekwazi ukuphathwa ngayo ngokusebenzisa le myeza.
I-Estrogen yi-hormone yesondo edlala indima ebalulekileyo ekuveliseni ngesondo, kwaye yintoni eyenza abasetyhini bafikelele ekuphumeni kwexesha bayaxhalaka ukusebenzisa le mveliso. Ukuba ngaba ulolu hlobo, ugqirha wakho uya kufuneka atyhile elinye iyeza kumhlaza wakho webele xa ungekho ucwangciso lokuzala abantwana kwakhona. I-estrogen ephantsi ithetha ukuba awukwazi ukuvelisa njengowesifazane kwaye ngenxa yoko, kubalulekile ukuba uviwo lwezokwelapha ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa lesi sidakamizwa. Eli nyanga liyi-aromatase inhibitors iqela leziyobisi
Esi sisilwanyana somlomo esisetyenziswe kunyango lweentlobo ezithile zesifo somhlaza webele. Ngaphandle koko, i-Exemestane (107868-30-4) isetyenziselwa ukunqanda umdlavuza webele xa ubuya emva kweyeza. I-Exemestane isetyenziswe izigulane zomhlaza zesifuba eziye zanyangwa unyango olubizwa ngokuba yi-tamoxifen malunga ne-2-3 iminyaka kwaye kungekho naluphi uphuculo olungundoqo. Esi sigqirha sinikezelwa kwizigulane zomhlaza zesifuba emva kokuba utyunjelwe ukunciphisa amathuba okugula okukhulayo kwakhona emzimbeni wakho. Ukuba uthe wafumana i-radiotherapy okanye i-chemotherapy, unyango lwakho luya kukucebisa ngexesha elifanelekileyo lokuqala ukuthatha i-Exemestane.
Ngakolunye uhlangothi, i-Exemestane isetyenziswe njengonyango lokuqala lohlobo lweengcambu zebele. Kwisigaba sokuqala somhlaza wesifuba, ugqirha uya kukucebisa ukuba usebenzise le myeza xa imeko ingazange ibe nzima, kwaye xa kungekho mfuneko yokuhlinzwa. Ngamanye amaxesha isilwanyana sinikezelwa nezigulana ukunciphisa umhlaza wesibeleko esikhulu ngaphambi kokugqithisa unyango. Amachiza akho aya kuba ngumntu ongcono ukuba akucebise ngexesha elifanelekileyo lokuthabatha eli gciwane emva kokuhlola imeko yomhlaza wakho webele.
Isilwayo sinqunyelwe ukunceda abafazi abanesifo sengculaza esiswini, esiye sagqithisa xa besesigxina xa besethatha i-tamoxifen. Isilwanyana sinciphisa amazinga e-hormone ye-estrogen, enceda ekumiseni iiswini zebele ezifuna i-hormone ukuphuhlisa. Abasetyhini, kwiindawo zabo zokuqala zomhlaza wesibeleko xa besesigxininini, bangasebenzisa le nkunkuma ukuba bancede balawule eso sifo. Ngamanye amaxesha isilwanyana singasetyenziselwa ukhathaza umdlavuza webele kubasetyhini abangasakwazi ukufikelela ekuphumeni komntu, kodwa soloko uthetha nogqirha wakho ngaphambi kokuba uqale ukuthatha i-Exemestane.
Le yonyango yomlomo kwaye kufuneka uthabathe ipilisi enye ye-25mg kanye ngosuku emva kokutya. Umyinge uhlala uhlala kuzo zonke izigulane zomhlaza zebele. Kukwacetyiswa ukuba uthathe izilwanyana ngexesha elifanayo ngalunye ngemiphumo engcono. Qinisekisa ukuba ulandela yonke imiyalelo yesigqirha ngexesha lokulinganisa. Ungathathi ngaphantsi okanye ngaphezulu kunokuba umiselwe ngamayeza akho. Ukuba unemibuzo okanye uxhalaba qhagamshelana nogqirha wakho ngaphambi kokuba uqale ukuthatha umyinge. Ugqirha wakho unokucebisa ukuba uthathe i-Exemestane iminyaka emininzi okanye wandise ixesha.
The I-Exemestane dosage kufuneka kuthathwe ixesha elichazwe ngugqirha wakho ukususela ngexesha lixhomekeke kwisimo somhlaza wesibeleko sakho. Ngokuqhelekileyo, isilwanyana kufuneka sithathwe malunga neminyaka emihlanu ukuya kweyishumi. Ngamanye amaxesha, ezinye izigulane ziqala ukuthatha i-Exemestane dosage emva kokuthatha i-tamoxifen iminyaka embalwa. Nangona kunjalo, ukuba ugqirha wakho uncoma ukuba uthathe le nkunkuma ukuba uphathe umhlaza wesifuba obuye wabuya okanye usasaze kwezinye iindawo zomzimba wakho, uya kuthatha umlinganiselo we-Exemestane kuphela nje ngokuba igcina izifo ezilawulwayo.
Nangona uhamba kakuhle, ungayeki ukuthatha umlinganiselo wakho ngaphandle kolwazi logqirha. Unokuziva uphilisiwe, kodwa umdlavuza usanda kulala kwaye xa ungaphathwa kakuhle ungabuya emva kwexesha elithile. Ukuba uthe waphoswa umthamo ngenxa yesinye sezizathu okanye ngelinye ilanga, olulandelayo aluthabathe ipilatile eyongezelelweyo ukuze uhlawule, uthathe itafile enye njengoko kucetyiswa ngugqirha wakho ukususela kwi-Exemestane emzimbeni wakho kuya kukwanela ukusa Usuku olulandelayo. Ukuze ukhuseleke, ungalokothi ukhulise umyinge ngaphandle kokuba ugqirha wakho akhuthaza ngoko oko kuyinto engavamile kakhulu.
Le michiza iye yavavanywa iminyaka emininzi, kwaye ibonakalise ukunikela iziphumo eziphezulu xa zisetyenziswa ngokuchanekileyo. Kwiminyaka emininzi ngoku, i-Exemestane ibalulekile ekwenzeni unyango lweentlobo ezithile zesifo somhlaza wesifuba kubasetyhini abaninzi, ngoko ke abo baye bafumana ukuphela komsebenzi. Ngakolunye uhlangothi, isicatshulwa siphinde siboniswe ukuba sinamandla ekukhuseleni umdlavuza webele ekubuyiseni emva kweyeza. Isiphumo esicacileyo sokuba uya kuyonwaba emva kokusebenzisa le nkunkuma kukunciphisa amanqanaba e-estrogen, okuyiyona nto ibangela ukukhula komhlaza wesibele emzimbeni wakho. I-Exemestane, xa isetyenziswe kakuhle, iveza iziphumo ezilungileyo kubasebenzisi.
Nangona kunjalo, xa kuphelelwe ixesha okanye kusetyenziswe ngaphandle kweengcebiso ezifanelekileyo kwiingcamango kunokukhokelela kwimiphumo emibi efana neentloko kunye nokunyuka. Ngoko ke, kubalulekile ukuba uhambe uhlolisiso lwezokwelapha ngaphambili, njengoko uqhubeka kunye nesilinganiso kunye nangemva. Izigulane zeCancer zikwacetyiswa ukuba ziye kwiimviwo zonyango rhoqo ukuze zijonge inkqubela yeyeza kunye nempilo yonke. Kukho namanye amayeza angasetyenziswa kunye ne-Exemestane kwiziphumo ezingcono, kodwa ugqirha wakho uya kukucebisa ngokufanelekileyo. Ukongezelela, qinisekisa ukuba ugqirha ugqirha wakho malunga naluphi na utywala kunye nalapho ufumana nayiphi na impembelelo engaphambili xa uthatha i-Exemestane dosage.
Exemestane isigamu-ubomi I-24hrs, kwaye kutheni ufunwa kuphela ukuba uthathe i-tablet enye ye-25mg kanye ngosuku. Isichengesi siya kuhlala sisasebenza kumzimba wakho kwaye ugcine ukuveliswa kwe-hormone ye-estrogen ngezantsi. Nangona ulibale ukuthayatha umlinganiselo wakho, ungathathi umthamo owongezelelweyo ngosuku olulandelayo. Isiza esele sikwimeko yakho yomzimba siya kukwanela ukuba sikuthathe ngosuku olulandelayo. Ubomi obupheleleyo yi-48hrs ngoko musa ukuzigqithisa ngokweqile, kunokukhokelela kwimiphumo emibi. Ungalokothi uthathe umthamo ogqithiseleyo okanye ongaphantsi kwelo cetyiswa ngugqirha wakho, kwaye nangona ugqirha wakho ebonisa ukuba uyeka ukuthatha izilwanyana, kuya kusasaza kumzimba wakho.
7.Iziphumo zempembelelo ze-Exemestane
Njengamanye amachiza, i-Exemestane ineentsikelelo zayo ezithathwa ngabantu abahluleka ukulandela imiyalelo yokulinganisa. Ukuba uthabatha eli liyeza ngaphandle kokuya kuviwo lwezonyango, unako ukufumana iziphumo ezibi kakhulu. Ukugqithisa nokugqithiswa kwezidalwa yizona zizathu ezibalulekileyo zeempembelelo ze-Exemestane. Ngokomzekelo, isilwanyana sinokuthi sihluleke ukukusebenzela ngenxa yesimo sakho somzimba okanye ukunyamezela. Le yonyango lonyango, kwaye lithatha ngaphandle kolwazi lugqirha lunokubangela ukuphucula iziphumo.
Kukho iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo eziqhelekileyo kubo bonke abasebenzisi be-Exemestane, kodwa ziyahamba emva kweenyanga ezimbalwa zokuqala zesilinganiso. Nangona kunjalo, xa iziphumo zempembelelo zide okanye zinzima kakhulu ukuza kuthwala, xelela iqela lakho lezonyango ukuba lifumane indlela engcono yokunciphisa. Iziphumo eziqhelekileyo ziquka;
Iimpawu zexesha lokusuka kwexesha ngenxa yokuba isilwanyana sinciphisa ama-hormone e-estrogen emzimbeni wakho kwaye yingakho kucetyiswa ukuba uthathe le michiza emva kokuzalwa kwakho. Akunakukwazi ukuzala abantwana emva kokuqala ukuthatha le nkunkuma.
Unako ukuva ubuhlungu kwiindawo zakho kunye neenthambo kwiinyanga ezimbalwa zokuqala zokulinganisa, kodwa zinyamalalala kunye nexesha.
Unokuhlangabezana nokudandatheka kunye nomoya ophantsi.
Ingxaki yokungazinzi enye ingxaki eqhelekileyo abasebenzisi be-Exemestane bahlangabezana kunye nokukhathala, nangona ungazange usebenze.
Ukucuthwa kwamathambo akho okanye i-osteoporosis yinto echaphazelayo abanye abasebenzisi bama-Exemestane.
Kukho nezinye iziphumo ezinobungozi ezinzima ukuba xa uziva nazo, kufuneka uxelele ugqirha wakho kwangoko ngaphambi kokuba imeko ibuhlungu. Nangona kunjalo, le miphumo echaphazelekayo iphakame kakhulu ngabasebenzisi be-Exemestane. Ziquka utshintsho lwesikhumba kunye neenwele, ukwanda kwamazinga e-cholesterol emzimbeni wakho, i-loos of appetite, kunye neenguqu zesibindi, phakathi kwabanye. Iziphumo zempembelelo ze-Exemestane maxa wambi zixhomekeke kwindlela umzimba wakho uphatha ngayo kwiziyobisi. Imizimba yabantu iyinkimbinkimbi, kwaye ngamanye amaxesha isilwanyana sinokusebenza kakuhle kuwe, kodwa xa umhlobo wakho ezama, igalela kwimiphumo emibi. Kunzima ukuchaza ngokusemthethweni ukuba yiyiphi imiphumo emibi ongayilindela xa usebenzisa le chiza.
Iindaba ezilungileyo kukuba uninzi lweziphumo zempembelelo ze-Exemestane zilawulwa xa ulwazisa ugqirha wakho ngexesha. Nangona kunjalo, nendima yakho ukuqinisekisa ukuba uyayilandela yonke imiyalelo yesilinganiso esinikezwa ngumenzi weziyobisi kunye nogqirha wakho naye. Kwakhona, qiniseka ukuba uya kuviwo lwezonyango rhoqo kwiziphumo ezingcono. Mxelele ugqirha wakho malunga naluphi na uhlobo oluthile olusenokuba nalo ngaphambi kokuba uqale ukuthatha umyinge. Khuphula zonke iinkxalabo kunye nogqirha wakho ukuze ugweme nayiphi na ingxaki.
Exemestane iinzuzo eyaziwayo ngokulawula ezinye iintlobo zesifo somhlaza wesifuba kubasetyhini. Ihlisa amanqanaba e-estrogen emzimbeni ofunwa ngumhlaza webele webele. Ngakolunye uhlangothi, isilwanyana sinokukunceda ukukhusela naluphi na uphuhliso lomhlaza wesibeleko emva kokuba uphumelele inkqubo yokucoca. Nangona oku kuyona inzuzo eyaziwayo kakhulu yokusebenzisa i-Exemestane, kukho nezinye iintlelo ozithandayo ngokuthatha le nkunkuma.
Ngokomzekelo, oku kungumlonyeni womlomo, kwaye oko kuthetha ukuba awuyi kuhlangana nabani na iigciwane xa uthatha amayeza akho. Iilisi linomsebenzi obalulekileyo osebenzayo kwiiyure ze-48, kwaye ukuba ulahlekelwa umyinge ongenakukhathazeka ngabo, kufuneka ufune kuphela umthamo olandelayo ngosuku olulandelayo, kwaye ulungile ukuya. Ucwaningo luye lwangqina ukuba i-Exemestane inokukunceda ekuthintela izicubu zomzimba kwi-oxidation kunye nomonakalo ovuzayo kumadoda nabasetyhini. Ngaphandle koko, le nkunkuma kuthiwa isebenzayo ekukhuseleni iiseli zomzimba wakho kumonakalo kwiDNA yazo nge-UV radiation ngexesha le-oxidation. I-Exemestane isebenza njenge-anti-inflammatory agent.
Ukujonga ngeendlela ezahlukeneyo Ukuhlolwa kwe-Exemestane, uya kuphawula ukuba eli chiza lifumene amava ahlukeneyo omsebenzisi ukusuka komnye umntu ukuya kwelinye. Nangona kunjalo, isilwanyana sinomyinge okhangayo kunye nenani elihle lokuphononongwa okulungileyo, oko kuthetha ukuba kuye kwaba luncedo olukhulu kubasebenzisi abaninzi. Isilwanyana sele sibalulekile kwihlabathi lezonyango ngokunjalo kunyango kunye nokulawulwa kweentlobo ezithile zesifo somhlaza kubesetyhini. Abasebenzisi abaninzi baye badumisa le nkunkuma ukuba ibe namandla ekunciphiseni ukuveliswa kwe-hormone ye-estrogen emzimbeni, ojongene nokukhula nokusabalala komhlaza wesifuba.
Kukho abasebenzisi abayithandayo ngenxa yonyango oluqinileyo lomlomo ohambisa iziphumo eziphezulu xa zisetyenziswa ngokuchanekileyo. Uninzi lwabasebenzisi be-Exemestane banelisekile ngendlela amayeza awancede ngayo ukulawula umdlavuza webele. Abanye baqinisekisa ukuba izidakamizwa ziye zadlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yokuphulukisa umdlavuza webele kunye nokukhusela isifo ukuba singabuyi. Iingcali zezobugcisa kunye nezohlukeneyo zenzululwazi zibonisa kwakhona amandla alo mhlaza webele webele. Isishwankathelo, ipesenti enkulu yezigulane zomhlaza zesifuba zinike i-Exemestane ukuhlaziywa okulungileyo kunye nokulinganisa okuhle.
Ngokufanayo, abanye abasebenzisi abazange bafumane amava amava kunye nezi zidangalisa zabo. Kuqhelekileyo kwimveliso emininzi ukwenzela ukuba iziyobisi zihluleke ukusebenza kwabanye abasebenzisi. Nangona kunjalo, uninzi lwabasebenzisi be-Exemestane abaye bafumana iimiphumo ezibi kakhulu zibonisa ukuba ukuhluleka kwabo ukubandakanya amayeza kwenkqubo yonke. Uviwo lwezokwelapha lubalulekile ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa esinye isilwanyana. Kukwacetyiswa ukuba uqhagamshelane nodokotela wakho ngokukhawuleza uqala ukufumana nayiphi na imiphumo emibi xa uthatha le nkunkuma. Phantse zonke iziphumo zecala le-Exemestane zilawulwa xa uzisa ugqirha wakho ngexesha elifanelekileyo.
Ngokuqhelekileyo, i-Exemestane yinyango enamandla eye yabaluleke kakhulu kunyango lomhlaza wesifuba kubasetyhini. Indlela efanelekileyo yokufumana amayeza amaninzi kunokuba unamathele kumyinge ophakanyisiweyo kwaye uhlale uquka iqela lakho lezonyango xa unayo nayiphi na imiphumo ephambili. Musa ukuyeka ukuthatha isigqirha ngaphandle kweengcebiso zegqirha zakho kuba unokungaphumeleli ukulawula umdlavuza webele, esiyisifo sobulali. Ngamanye amaxesha izidakamizwa zingenakukwazi ukusebenzela wena, kodwa ugqirha uya kukunika esinye isilwanyana esinomdla kumzimba wakho.
10.Exemestane e thengiswayo
Exemestane e thengiswayo ithengiswa phantsi kwamagama eempawu ezahlukahlukeneyo kumabakala ahlukeneyo okanye kwimimandla, kunye negama legama eliqhelekileyo lalo mzi nguAromasin. Unokuthenga i-Exemestane kwi-intanethi eninzi okanye nakwephi na ikhemisi elikufutshane nawe, kodwa qiniseka ukuba awuqali ukuyithatha ngaphandle kweengcebiso zogqirha. Qinisekisa ukuba wena ukuthenga i-Exemestane powder evela kumthengisi ohloniphekileyo okanye umenzi wemveliso engcono. Akunjalo Umxhasi we-Exemestane ufumana i-intanethi inokuthenjwa. Abanye banokuba nekhwalithi ephantsi okanye iziyobisi eziqhelekileyo ezinokuba yingozi kwimpilo yakho. Khangela ukuhlaziywa kwabaxhasi ukukukhokela ekwenzeni isigqibo esifanelekileyo.
Ugqirha wakho uya kukukhokela ngendlela yokufumana i-Exempestane engcono kunye neyona ndlela ephezulu evela kumthengisi onokwethenjelwa kwaye uthembekileyo. Thina sisona sikhulu somenzi we-Exemestane kunye nomthengisi kuloo mmandla, kwaye senza ukuhambisa ngexesha elifanelekileyo. Jonga i-website yethu ukwenza i-oda yakho namhlanje uze uqiniseke ukuba ufumana i-Exemestane esemgangathweni eya kukunceda ukulwa nomhlaza wesifuba. I-website yethu iyasebenziseka. Ngaloo ndlela, unokwenza umyalelo wakho uphuthuke ngokusondeza kwindlu yakho. Ukuba unemibuzo okanye ixhala, unako ukuqhagamshelana nathi ngokusebenzisa i-imeyile kunye neefowuni kwiwebhusayithi yethu.
Ngakolunye uhlangothi, qiniseka ukuba uyayiqonda into yokuba imithetho yelizwe lakho ichaza malunga nokusetyenziswa, ukuthenga kunye nokuthengwa kwe-Exemestane. Siyiinkampani ezigcina umthetho, kwaye asifuni ukubeka abathengi bethu kwiinkathazo ngemithetho yelizwe lasekhaya ukuba bangenise okanye bathenge iimveliso zethu eziphezulu. Ngokomzekelo, eUnited States of America naseKhanada, i-Exemestane ihlala isigqirha kuphela. Oko kuthetha ukuba awukwazi ukuthenga leyeza ngaphandle kokuba unemvume kadokotela. Nangona kunjalo, akuvumelekanga ukuba nelifa, ukuthenga okanye ukusebenzisa iilisi, kodwa i-Exemestane ayikho izidakamizwa ezingaphezulu kweli lizwe kula mazwe amabini.
11.I-Exemestane ukuphatha umhlaza wesibeleko kubasetyhini
I-Exemestane yiyilisi ephezulu kakhulu ebonakaliswe kwiminyaka ukuba ibaluleke kwihlabathi lonyango ekwenzeni umhlaza wesifuba kubasetyhini. Isiza sisebenza ngokunciphisa imveliso kunye nama-hormone e-estrogen emzimbeni wakho ojongene nokukhula kunye nokusasazeka komhlaza wesibele emzimbeni wakho. Esi sirhoxiso sisetyenziswa kakhulu ngabasetyhini abaye bafumana ukuphela komntu ngenxa yokuba inokuchaphazela abafazi abaseminyakeni yabo yokuzala abantwana. I-Exemestane nayo ibaluleke kakhulu ekukhuseleni abasebenzisi ekubuyiseni okanye ekusasazeni komhlaza wesibele emva kokufumana unyango oluphumelelayo. Ngokuxhomekeka kwisimo sakho somhlaza wesibeleko, ugqirha wakho unokukucebisa ukuba uthathe eso sigqirha njengonyango ukuba umhlaza wakho usezigaba zokuqala. Amayeza akho angenza ukuba i-Exemestane isebenzise ixesha elithile ngaphambi kokuqhutyelwa kwenkqubo yokucoca.
Kunconywa ukuba uthathe i-tablet enye ye-25mgs ngosuku, okuyiyona isisombululo esisigxina esiphezulu kunye nezigulane ezonyango umdlavuza webele. Isilwanyana singasetyenziselwa kunye namanye amayeza afunekayo ugqirha wakho uya kuziva ufanelekile kuwe. Khumbula ukuba ungaze ukwandise okanye unciphise umlinganiselo wesethi ngaphandle kokubonisana namayeza akho. Xa uthe wafumana nayiphi na imiphumo emibi xa uthabatha izilwanyana ngogqirha wakho uncedo. Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo ezifana nentloko, ukuxakeka, kunye nokuhlanza kunokuqhelekileyo kwiinyanga zakho zokuqala zokulinganisa, kodwa ukuba zihlala ixesha elide kunexesha eliqhelekileyo zixelele i-physic yakho. Phantse zonke iziphumo zempembelelo ze-Exemestane ziyalawulwa ukuba uthathe amanyathelo alungileyo kwaye ulandele imiyalelo yokulinganisa.
Isikhokelo esiphezulu kwiDihydroboldenone / iDHB yoKwakha(Ivula ithebhu entsha)
Goss, PE, Ingle, JN, Alés-Martínez, JE, Cheung, AM, Chlebowski, RT, Wactawski-Wende, J., ... & Winquist, E. (2011). I-Exemestane yokukhusela umhlaza kwintsholongwane kuma-postmenopausal women. I-New England Journal of Medicine, 364(25), 2381-2391.
Yardley, DA, Noguchi, S., Pritchard, KI, Burris, HA, Baselga, J., Gnant, M., ... & Melichar, B. (2013). I-Everolimus kunye ne-exemestane kwizigulane ze-postmenopausal ezine-cancer + yesifuba se-HR: I-BOLERO-2 ukuhlaziywa kokugqibela kokungenasiphelo kokuqhubeka. Uphuhliso lwezonyango, 30(10), 870-884.
Pagani, O., Regan, MM, Walley, BA, Fleming, GF, Colleoni, M., Láng, I., ... & Ciruelos, E. (2014). I-adjuvant exemestane kunye nokunciphisa i-ovari kumdlavuza webele we-premenopausal. I-New England Journal of Medicine, 371(2), 107-118.